You are at:Home»NHAU DZEMUNO»ticha akatyora mwana ruwoko
Anga akatarisira kunyora Maths, English, Shona, Science, Geography, Agriculture, History neCommerce.
Vanoti vanga vakatarisira kubudirira kwemwana wavo zvichitevera kugona kwaanoita muchikoro. Zvakadai, VaGoto vanoti murairidzi wekutyora mwana ruwoko uyu akabvuma mhosva yake kumahofisi evakuru vezvikoro kwavakaenda uye ndokuvimbisa kuti aizorapisa Synodia kusvikira apora.
Pasi pemutemo wenyika, kurova mwana – kumba kana kuchikoro – imhosva.
Nyaya ngaiongororwe mudzidzisi uyu akakanganisa hupenyu hwemwana apa mhosva yake akubvuma.vangani vamwe vana vaachatyora maoko. Haasi mudzidzisi uyu ndehwe tsiva mukadzi uyu. Ngaasa bvumirwe zvakare kurairidza!